‘योजनाबद्ध रुपमा छोरा मारिएको छ, हामीले न्याय पाउनुपर्यो’ :: साझावोली संवाददाता :: ‘योजनाबद्ध रुपमा छोरा मारिएको छ, हामीले न्याय पाउनुपर्यो’
‘योजनाबद्ध रुपमा छोरा मारिएको छ, हामीले न्याय पाउनुपर्यो’
मृतक यानबहादुर बस्नेतका बुवा दिलबहादुर बस्नेत ।
चरिकोट – दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर–३, सर्सेपुका २४ वर्षिय यानबहादुर बस्नेतको हत्या भएको पुष्टि गर्दै प्रहरीले त्यसमा उनकै १९ वर्षिया प्रेमिकाको संलग्नता रहेको बिवरण सार्वजनिक गरेको छ । घट्नाको समग्र प्रकृति हेर्दा किशोरी एक्लैले घट्ना घटाएको भन्नेमा पीडित परिवार र स्थानीय शसंकित छन् । प्रस्तुत छ, मृतकका बुवा दिलबहादुर बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश..
घट्नाको अनुन्धानप्रति हामी पीडितको चित्त बुझेको छैन । हामीलाई शंका लागेको कुरा हत्यामा केटीको मात्रै संलग्नता छैन । परिवारका अरुको पनि हात छ । केटीको बुवाले घट्नाको योजना बुनेको हो ।
घट्ना अगाडी देखि पटक पटक हामीलाई काट्छु, मार्छु भनेर धम्कि दिने काम भएको छ । ३० गतेको चुनावको दिनपनि रामकृष्ण खड्काको छोरा शुसिल भन्नेले मेरो छोरो यानबहादुरलाई तँलाई पख्लास्, देख्लास काट्छु, मार्छु भन्ने शव्द बोलेको थियो । चुनावको मतगणनापछि भोलीपल्ट विहान रामकृष्णलाई फोन गरेर (मेरो ज्वाई पर्छ) ज्वाई ज्वाई तपाईको छोराले मलाई र छोरालाई यस्तो यस्तो धम्कि दियो । कारण के हो ? छोरार्लाइ सम्झाउनु भनेर फोनमा पनि कुरा गरेको थिएँ । घट्नापछि हिरासतमा भेट्न गएकासँग पनि म छुटौं न मात्रै सर्सेपु पुगेर कसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने मैले जानेको छु भनेर भनेको छ ।
दुई वर्ष अघिदेखि केटा र केटीबीचमा प्रेम रहेको कुरा साँचो हो । तर केटीले मात्रै मारेको हुन सक्दैन । बिवाहको लागि वाउआमा नमानेकै कारण मेरो छोरोलाई बोलाएर मारेको हुनसक्छ । घरभित्रै मारेर बाहिर ल्याएर झुन्ड्याएको निदालमा डामपनि छ । त्यसपछि घरबाट घिसारेर लगिएको छ । घरबाट ३० मिटरमा वाईकको चाबी खसेको छ । मृतकको हातमा घिसार्दा टाउको र हातमा माटो लागेको छ । त्यसपछि ३० मिटर टाढा खोलामा काफलको वोटमा झुण्ड्याईएको छ ।
आफ्नो घाँटी अठ्याउँदा २४ वर्षको केटा चुप बस्यो होला ? एउटा केटीले एउटा केटाको घाँटी अठ्याएर मार्नसक्छ कही ? त्यो हुँदै नहुने कुरा हो । यो कुरा शंकास्पद छ । त्यसमा केटीको वाउसहित परिवारको हात छ । कि मार्ने मान्छे अरु देखाउनुपर्यो नभए एउटा केटीले मात्रै केटालाई मार्न सक्दैन ।
म्यादी प्रहरीमा त्यो केटीले जागिर खाई । जागिर खाँदा चरिकोट ल्याउन र जागिर सकिएपछि घर पनि केटाले पुर्याएको हो । केटीले मार्ने भए त्यसबेला अरु मन्छे उठाएर वाटोमा मार्न सक्थ्योहोला । यो त घरमै मारिएको छ ।
केटा र केटीको बीचमा हाडनाता पर्नेभए कानुन र सम्बन्धित निकाय थियो । केटा कानुनको भागिदार हुन्थ्यो । केटीको ईच्छा नभए बलात्कार गर्न आयो भनेर केटीले भन्नसक्थ्यो । केटा कानुनको भागिदार हुन्थ्यो । मान्छेनै मार्नुपर्छ भन्ने छैन नी । हत्यानै किन गरियो भन्ने भन्ने हो ।
अब घट्ना घटिसक्यो । निर्दोष नफसोस् दोषीर्लाइ कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही होस् । नभए हामी जे गर्नपनि तयार छौं । दोषी छुट्नुभएन । भोली फेरी यस्ता घट्ना नदोहोरियोस् । हाम्रो माग यही हो । हामीले न्याय पाउनुपर्छ । हाम्रो छिमेकी टोल, गाउँले सबैको माग यही हो ।
प्रहरीले अझै गहिरो अनुसन्धान गरोस् । अदालतबाट न्याय पाउँछौं भन्ने पर्खाईमा छौं । सत्यतथ्य अदालतले फैसला गर्दिनुपर्यो । दोषी नउम्कियोस् ।
दोलखा गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर ३, का दिलबहादुर बस्नेतसँग छोराको हत्या घट्नाको विषयमा गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असार ४, २०७९ ०७:४६